मंगलवारमा कुन देवी-देवताको पूजा गर्ने ? हिन्दुधर्ममा हप्ताको हरेक वारलाई देवी-देवताको वार मानिने गरिन्छ। विशेष व्रत र उपवास बाहेक अधिकांश हिन्दु धर्मावलम्बीहरूले हप्ताको कुनै एक वा दुईदिन सोहि वार अनुसारको देवताको पूजा गरि व्रत बस्ने गर्दछन् । हेरौँ, मंगलवारमा कुन देवी-देवताको पूजा गरिन्छ । नेपाली पात्रो अनुसार यो दिन हप्ताको
कृषि एम्बुलेन्स चलेसँगै पोखराका कृषक दंग, उपभोक्ता हर्षित
पोखरा : पोखरा महानगरपालिकाले कृषि उपज ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरेको छ । महानगरले आगामी वर्षदेखि एम्बुलेन्स चलाउने कार्यक्रम ल्याएको भएपनि यस वर्षबाट नै सुरु गरेको हो । पोखराको कृषि विकाश महाशाखाले अन्नपात एग्रो प्रालिसँग सहकार्य गर्दै कृषि उपज ढुवानी सेवा सुरु गरेको महानगरले जनाएको छ। यसले पोखरा
दुखद खबर : रोपाइँ गर्दा गर्दै चट्याङ लागेर किशानको निधन
कैलालीमा चट्याङ परेर एक जनाको मृत्यु भएको श्रोतले जनाएको छ। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाका-५ का ४८ वर्षीय पुनाराम चौधरीको चट्याङ लागेर मृत्यु भएको हो। मंगलबार बिहान गोदावरी नगरपालिका-३ मालाखेतीमा रेडियन्ट ग्यास कम्पनी नजिक रोपाइँ गर्न गएका थिए। साेही क्रममा उनको चट्याङ लागेर मृत्यु भएको कैलालीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक वेदप्रकाश
मंगलबार सुन-चाँदीको मूल्य स्थिर
c रहेको छ। अघिल्लो दिन सुन प्रतितोला ९७ हजार सात सय रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा आज पनि सोही मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ। त्यस्तै, नेपाल सुन-चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज चाँदी प्रतितोला १२ सय ५५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। सोमबार पनि चाँदी सोही मूल्यमा कारोबार भएको थियो। मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने सुन
जननेता मदनकुमार भण्डारीको ७१औँ जन्मजयन्ती
नेकपा (एमाले)का तत्कालीन महासचिव जननेता मदनकुमार भण्डारीको ७१औँ जन्मजयन्ती आज विविध कार्यक्रम गरेर मनाइँदैछ । जन्मजयन्ती मनाउन एमालेका जनसङ्गठनहरू र मदन भण्डारी फाउण्डेशनले विभिन्न कार्यक्रम तय गरेका श्रोतले जनाएको छ । जयन्तीलाई साताव्यापीरूपमा मनाउन फाउण्डेशनले यही असार १० गतेदेखि असार १६ गतेसम्मका कार्यक्रम तय गरेको छ । फाउण्डेशनले आज मुख्य
सिंघिया खोलामा आएको बाढी बस्तीमा पस्यो
अबिरल वर्षासँगै सिंघिया खोलामा आएको बाढी बस्तीमा पसेको छ । मंगलबार बिहान विराटनगर महानगरपालिका वडा नं. ८ को खोला किनारका बस्तीमा बाढी पसेको हो । सिंघियाको बाढीका कारण खोला किनारमा २५ परिवार विस्थापित भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी नायव उपरीक्षक दीपक श्रेष्ठका अनुसार बिस्थापितहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको
मालबाहक ट्रकमा एक्कासी आगलागी
सप्तरीमा गुडिरहेको एक मालबाहक ट्रकमा एक्कासी आगलागी भएको छ । आगलागीले ट्रकको अगाडिको भाग जलेर पूर्ण रुपमा क्षति भएको श्रोतले जनाएको छ । पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका-१ स्थित धकंकालिनी मन्दिर र कोशी व्यारेजको बीचमा पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको ना.६ख ५२६३ नम्बरको ट्रकमा आगलागी भएको प्रहरीले जनाएको छ ।